Inona no ho hita ao Seville ao anatin'ny iray andro | News Travel
Mariela Carril | 12/05/2022 17:00 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 18:42 | Inona no ho hita, Sevilla
Raha mandeha fitsangatsanganana any Espaina ianao na manao fizahan-tany anatiny ary manapa-kevitra ny handeha any Seville, dia misy toerana sy traikefa sasantsasany izay tsy azonao atao. Ahoana ary inona no hofidiana? Ny 24 ora dia tsy maharitra, raha heverina fa misy ampahany mandeha amin'ny nofy ary mety misy iray hafa amin'ny dia ...
Koa ity ny lisitray Inona no hojerena ao Seville ao anatin'ny iray andro.
1 Katedraly Santa Maria
2 Fiangonana Mpamonjy masina
4 Royal Alcazar an'ny Seville
5 tilikambo volamena
6 Kianja Vaovao
7 Distrika Triana
9 Lapan'i San Telmo
10 Misakafo any Seville
11 Jereo ny fampisehoana flamenco
Katedraly Santa Maria
Izy io dia tandindon'ny tanàna ary amin'ny fotoana iray ihany Io no tempoly gothic lehibe indrindra any Eoropa, ka raha tianao ity fomba ara-javakanto ity dia tsy ho diso ianao. Ao anatiny ny fasan'i Christopher Columbus, izay manampy mahasarika ny fitsidihana.
Ny tsara indrindra dia ny mividy ny Taratasy mitambatra hitsidihana ny Katedraly, ny Giralda ary ny Fiangonan'i El Salvador, 10 euros daholo. Ary raha manampy 5 euros fanampiny ianao dia maka ny torolalana audio. La Giralda no tilikambo lakolosy, izay toerana avo indrindra ao an-tanàna.
Ny tilikambo dia naorina nandritra ny famerenana amin'ny laoniny ary ny dikan-teny tany am-boalohany dia nampiditra ny minaretan'ny moske izay nijoro teo amin'ny toeran'ny tempoly katolika taloha. Manana fomba fijery mahafinaritra avy eto ianao, saingy tandremo fa tsy misy tohatra, fa tohatra malama. Mendrika ny loza izany.
Fiangonana Mpamonjy masina
Izany dia fiangonana miloko ary miaraka amin'ny fomba tena mahaliana. Naorina teo anelanelan’ny taonjato faha-8 sy faha-XNUMX izy io. Ny fidirana hijerena azy ao anatiny dia mitentina XNUMX euros.
Ny kianja no kianja malaza indrindra ary Voahodidina lakandrano lava iray izy io, izay ivezivezen’ny sambo kely. Ao anatin'ny Valan-javaboarin'i María Luisa izy io, naorin'ny mpanao mari-trano Espaniola Aníbal González Álvarez Ossorio. 1929, ary maneho ny firaisana amin'ireo zanatany any ampitan-dranomasina sy ny fandriampahalemana.
Ny kianja dia misy mifandimby taila maro loko avy amin'ny vazan-tany rehetra firenena ary mivoha mankany amin’ny Reniranon’i Gualdaquivir, lalana mankamin’ny Atlantika ary mankany amin’ireo zanatany Amerikana indrindra. Ny kianja koa dia manamorona ny Avenida de Isabel la Católica ary mazava ho azy fa ampahibemaso sy malalaka ny fidirana.
Eo amin'ny kianja dia ho hitanao ihany koa dia nifehy entana. Azonao atao ny mitondra azy ireo eo am-baravaran'ny katedraly mba handehandeha manodidina ny tanàna. Ny lalana tsara indrindra dia ny manomboka amin'ny katedraly ary miampita ny Park María Luisa mandra-pahatonganao any amin'ny Plaza de España. Mahafinaritra ilay dia ary mitentina manodidina ny 36 euros ho an'ny olon-dehibe efatra.
Fantatrao ve fa seho maro ny Lalao amin'ny seza fiandrianana?
Royal Alcazar an'ny Seville
Minitra vitsy miala ny Plaza de España no misy azy. Ity dia a lapa malaza naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia tamin’ny taonjato fahefatra ambin’ny folo aza naverina tamin'ny fomba mudejar izany. Amin'izao fotoana izao, ny trano sasany any ivelany dia mbola ampiasain'ny fianakavian'ny mpanjaka ho fonenany ofisialy.
Ny trano mimanda no lapa Eoropeana tranainy indrindra ampiasaina ary nanomboka tamin'ny 1987 dia anisan'ny lisitry ny UNESCO.
Ity tilikambo ity dia tany am-boalohany ampahany amin’ny mandan’ny tanàna izay nampisaraka ny Alcázar tamin'ny ambin'i Seville, miaraka amin'ny tanjona mifehy ny fandalovan'ny renirano Guadalquivir. 3 euros ny fidirana.
Mamakivaky ny tanàna sy mankany amin'ny katedraly ianao dia hiampita an'io kianja malalaka sy malalaka voahodidina trano tsara tarehy. Amin'izao fotoana izao, ireo tranobe ireo dia mipetraka, ny sasany amin'izy ireo, amin'ny fivarotana malaza mpamorona. Tsy toerana feno mpizahatany izy io ka raha mitady perla ivelan'ny fitsidihan'ny olombelona ianao dia iray amin'izy ireo.
Fitsangatsanganana iray amin'ireo distrika mahafatifaty sy be loko indrindra ao Seville mendrika izany. Eo ampitan'ny renirano izy io ary tsy maintsy miampita ny tetezana fotsiny ianao. Toa nalevina teo aloha ireo voampanga ho nanao ody...
Ity rafitra maoderina ity dia noforonin'ny mpanao mari-trano Jurgen Mayer ary namelombelona indray ny kianjan'ny tanàna somary hadino. Elo hazo misy asa ara-barotra. Izany hoe, misy trano fisakafoanana sy terrasse panoramic hankafizana ny fomba fijery tsara.
Fikasihana maoderina ao amin'ny tanàna tranainy iray.
Lapan'i San Telmo
Ny trano kanto dia avy amin'ny Taonjato faha-XVII, ankehitriny eo am-pelatanan'ny Governemanta Autonomous of Andalusia. Manana trano fiangonana tsara tarehy amin'ny fomba Baroque izy io, izay azo idirana amin'ny iray amin'ireo pationy, izay misy ny sonian'ny mpanao mari-trano Leonardo de Figueroa.
Io no iray amin'ireo trano tranainy indrindra ao an-tanàna amin'ny fomba Mudejar.
Misakafo any Seville
Tsy vitan'ny hoe manao fitsidihan'ny mpizaha tany fa momba traikefa mivantana, avy eo, any Seville dia tsy maintsy mankafy ny gastronomy eo an-toerana ary misy toerana tsara Duenas Bar. Bar kely mahandro sakafo an-trano izy io ary misokatra amin'ny 8 ora maraina. Afaka misakafo any ianao na mividy sakafo ary manohy mandeha.
Ny bara Eo anoloan'ny Palacio de las Duenas no misy azy, naorina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, fonenan'ny Dukes of Alba hatramin'ny taonjato faha-XNUMX ary miaraka amin'ny fanangonana zavakanto mahavariana. Afaka mitsidika azy ianao. zahao ny anatiny sy ny zaridainany… Mazava ho azy fa misokatra amin'ny 8 ny trano fisotroana fa amin'ny 10 ihany no misokatra ny lapa.
Toerana iray hafa azo hanina dia ny Santa Cruz manodidina, tena mpizaha tany fa tsy latsa-danja amin'izany. Nanomboka tamin’ny taonjato faha-XNUMX izy io, amin’ny ankapobeny, na dia hita aza ny sisa tavela amin’ireo lalankely sy lalankely tery. Ao amin'ny kianjan'izy ireo any isan'ny trano fisakafoanana, trano fisotroana ary trano fisotroana kafe.
Mety misy tranonkala iray hafa Bar Gonzalo, manoloana ny Katedralin’i Séville. Trano mavo io, tsy dia lafo ny vidiny fa tena matsiro ny sakafo. Afaka misakafo atoandro 22 euros ny paella miaraka amin'ny akoho ho an'ny olona roa.
Jereo ny fampisehoana flamenco
Flamenco sy Seville dia mitovy amin'izany ka ny mankafy fampisehoana tsara dia tokony ho ao amin'ny lisitray. Betsaka ny seho fa ao amin'ny Calle Águilas ny Flamenco Museum, toerana tsara hianarana momba ity dihy ity sy hijerena fampisehoana mivantana.
Raha mandany alina ao an-tanàna ianao, ny tsara indrindra dia ny mivoaka hisakafo amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana misy flamenco fampisehoana, raha tsy izany dia misy foana ny tranombakoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Sevilla » Inona no hojerena ao Seville ao anatin'ny iray andro